‘बागी २’ का ११ गल्ती – Mero Film
‘बागी २’ का ११ गल्ती
२०७४ चैत १९ गते २१:३८
टाइगर श्रफको फिल्म ‘बागी २’ ओपनिग डे बाटै बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरिरहेको छ । फिल्म चल्नुको कारण टाइगर उनको एक्सन र डाइलग हो । चर्चाको शिखरमा जादै गरेको फिल्म यस फिल्मलाई गहिरिएर हेर्दा सानो सानो गल्ती रहेको देख्न सकिन्छ ।
फिल्मको एक सिनमा रातो पछ्यौरी उडेको देखिन्छ जहा रोनी आफ्नो घरको बाल्कोनीमा उभिएर समात्छन । पछ्यौरी बाल्कोनीको धेरै नजिक जान्छ तर जब उनले समत्छन, त्यही पछ्यौरी माथि उडिरहेको हुन्छ ।
एक सिनमा रोनी रातमा नेहालाई म्यासेज गर्छन् । अनी फेरी राती नै मोबाइलमा कुरा गर्छन् । कुरा गर्दा गर्दै नेहा निदाउछिन र रोनी उनी उठछिन भनेर कुरेर बस्छन । बिहान जब नेहा उठछिन रोनी अझै सम्म पनि फोन मै कुरिरहेको हुन्छन् । खास कुरा यो हो कि यदी रोनी फोनमा कुरा गरिरहेका छन भने उनको फोनको लाइट कसरी अन देखिन्छ ?
फिल्मको एउटा सिनमा नेहालाई गुण्डाले पिट्छन तर यही कारको सिसामा क्यामेराम्यान देखिन्छन । फ्रेमको साइडमा क्यामेरा मज्जाले देखिएको छ ।
अर्को सिनमा रोनीलाई जेलको भित्र कुटिरहेका हुन्छन । यस समय उनको दुइटै हातमा एक पाइप तथा डोरी बादेको देखिन्छ । क्यामेरा जुम हुदा देखिन्छ कि उनको हात त टाउको नजिक बधिएको छ ।
अर्को एक सिनमा रोनी जेल भित्र हावामा उडेर सिपाहीलाई पिट्छन । यस बिचमा वाल भात्किन्छ । सिपाही उचलिएर पछारिन्छन त्यो बेला फेरी वाल जस्ताको तस्तै देखिन्छ ।
एक सिनमा रोनी पुलिस स्टेसनमा सिपाहीलाइ टेबुलमा लडाउछन् । यस समय फ्रेममा देखिन्छ कि सिपाहीको पेन्टको जिप खुला छ । यहि अगिल्लो सिनमा टेबुलमा राखेको फ्ल्याग रोनीको लेफ्ट साइडमा हुन्छ तर रोनीले राइट साइडमा समत्छन् यो कसरी हुन्छ?
एक सिनमा भिलेन रोनीलाइ मार्नको लागि बन्दुक उठाउन प्रयास गर्छन । तर यहि बीच रोनी नदेखी उसको गनमा फायर गर्छन र गन पर जान्छ । फेरी रोनीको गानको डिरेक्सन अर्कै ठाउमा हुन्छ कसरी लाग्छ र यसरी निसाना ?
एक सिनमा मनोज केही पुलिसवालाको साथ आउँदै गरेको देखियो । यस दौरान उनको कुर्ताको बाटन खुल्ला हुन्छ । फेरी अर्को सिनमा कुर्ताको बाटन बन्द देखिन्छ ।
एक सिनमा रोनी एक वाच टावरमा पातलो डोरीले बादिएका हुन्छन र घुमी घुमी गोली चलाऊछन । फेरी यहाँ बुझ्न गाह्रो के छ भने यो डोरी कस्को साहारामा अड्केको छ ।
फिल्मको एक सिनमा रोनी सबैको पिटाइ गर्छन् । तर यही क्रम्मा एक जना त छुदै नछोइ हावामा उड्छन् ।
एक सिनमा एक सेतो कार बिचमा आउछ र कालो कारसँग ठोकिएर हावामा उड्छ । जब कालो कार ठोकिदाको समय सेतो कार हल्लिदा पनि हल्लिदैन ।